Xildhibaan Cabdi Samad oo sheegay Xukuumadda inay heshiis la geli rabto Kenya – STAR FM SOMALIA
Iyadoo ay taagan tahay xiisada ku aadan darbiga Dowladda Kenya ay ka dhisi rabto Xuduuda Somaliya iyo Kenya ay wadaagaan, ayaa Xukuumadda Somaliya waxaa la sheegayaa inay heshiis la geli rabto Dowladda Kenya.
Xildhibaan Cabsi Samad Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax oo mar soo noqday Wasiirka arimaha Gudaha Somaliya ayaa sheegay in maalmaha soo socda Xukuumadda ay heshiis la geli rabto Dowladda Kenya.
Waxa uu sheegay heshiiskaasi in uusan aheyn mid qarsoon, balse Xukuumadda laga rabo inay dib u dhigto heshiiskaasi inta arinta darbiga meel ay u dhaceyso.
“Mudane Guddoomiye waxaa jirta in Xukuumadda maalmaha soo socda ay heshiis la geli rabto Kenya, heshiiskaasi waa mid lawada og yahay oo aanan qarsooneyn, waxaan ka codsaneynaa Xukuumadda in dib loo dhigo heshiiskaasi inta arintan ay meel u dhaceyso.” Ayuu yiri Xildhibaan Cabdi Samad oo ka hadlaayay kulankii Baarlamaanka ee shalay.
Inkastoo Xildhibaanka uusan tilmaamin nooca uu yahay heshiiska Xukuumadda Somaliya iyo Kenya ay wada geli rabaa, ayaa hadana waxa uu sheegay kaliya in xilligan uusan mudneyn heshiis in Kenya lala galo.
Baarlamaanka Somaliya ayaa loo qaybiyay qaraar ka dhan ah Darbiga Dowladda Kenya ay ka dhiseyso Xuduuda Somaliya, iyadoo Baarlamaanka ay qaraarkaasi go’aan uga gaari doonaan 48 saac gudahooda.
Kenya ayaa si cad u doonaysa inay boobto dhul Somaliyed, xilli Kenya ay horay u qaadatay dhulkii la odhan jiray NFD oo hada Kenya ay u taqaan Gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.
Xaalada Magaalada Beladweyne oo kacsan kadib markii shalay dil uu ka shacay